Wednesday September 05, 2018 - 11:36:39 in Wararka by Super Admin
Magaalada Asmara ee caasimadda wadanka Eritrea waxaa maanta ka furmaya kulan u dhaxeeya sedax hoggaamiye kaas oo looga hadlayo isbedelka siyaasadeed ee ka dhacay geeska qaaradda Afrika.
R/wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa gaaray magaalada dekadda leh ee Casab waxaana halkaas ugasii horreeyay Madaxweynaha Eritrea Efawarki, xukuumadda Addis Ababa ayaa loo ogolaaday in badeecadaha kalasoo degto dekadda Casab.
Dhinaca kale Max'med Cabdullaahi Farmaajo ayaa socdaal aan horay loosii qorsheysan ku tagay magaalada Asmara halkaas oo looga yeeray, ilo wareedyo ayaa sheegaya in shirkan uu daba socdo socdaalkii R/wasaaraha Itoobiya ku yimid Muqdisho ee lagusiiyay illaa afar dekadood.
Itoobiya iyo Ereteria ayaa si lama filaan uga heshiiyay dagaalkii sokeeye ee ka dhaxeeyay waxayna sheegeen in awoodooda dhaqaale iyo midda siyaasadeed mideynayaan arrinkaas loo fasirtay in ay umidoobayaan muslimiinta geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida.
Warar kale ayaa sheegaya in shirka looga dhawaaqi doono dib uheshiisiin laga dhax sameeyo dowladaha Eritrea iyo Jabuuti oo dagaal dhuleed uu dhaxmaray sanaddii 2009.